सफलता, विफलता, आरोह अवरोह, दुःख, कष्ट, खुसी, हाँसो, विविध समस्याहरु संगको साक्षात्कार अनि ती समस्याहरुको समाधान खोज्दै जीवनका उकाली, ओराली अनि भञ्ज्याङहरु काटिने रहेछ । जीवनको यात्रामा कोहि भेटिने अनि कोहि छुटिने भइरहने रहेछ । समय संगै जीवनयात्रामा आइरहने यी र यस्ता आरोह अवरोहहरुमा नै जीवन जिउनुको अनुभूति संगालिदै गइने रहेछ । आफ्नो जीवनलाई सरसर्ती नियाल्दा यस्तै महशुष हन्छ मलाई ।
म एक सामान्य परिवारमा जन्मेकी हुँ । बुवा कैलाश प्रकाश जोशी र आमा शान्ती जोशी कि म जेठी छोरी । म भन्दा मुनि बहिनीहरु थिए, जेठी छोरी भएकोले मेरो भूमिका केहि फरक र जिम्मेवारीपूर्ण थियो । मैले मेरा आमा, बुवाको दुःख अनि संघर्ष नजिकबाट हेरेकी छु, बुझेकी छु । दुःख गरेर आमा, बुवाले मलाई हुर्काउनु भएको, मनोबल बढाउनु भएको अनि पढाउनु भएको हो । मेरो बुवाले कहिल्यै विद्यालय जानु पाउनु भएन, तर पनि बुवामा असाध्यै ठोस र सकारात्मक सोच थियो, प्रगतिशील निर्णय गर्ने क्षमता थियो । बुवाले घर व्यवहार चलाउन हरेक पटक लाग्ने हाट बजारमा चामल बेच्न लानु हुन्थ्यो, सानु सुन पसल पनि थियो हाम्रो, सुन पसलमा कहिले बुवा, कहिले काकाहरु बस्नु हुन्थ्यो । बुवा, काका यताउता जानुहुदाँ कसैले सुनको भाउ सोध्यो भने तोलाको २२९ रुपैया भन्नु है भन्नुहुन्थ्यो । आफैले भोगेको ती दिन सम्झदा एकादेशको कथा जस्तो लाग्छ ।
मेरो आमा अलि खानदानी परिवारकी हुनुहुन्थयो, ठेकेदारकी छोरी । सुख, सयलमा हुर्कनु भएकी । घरमा काम केहि पनि गर्न नपर्ने भएकोले घर व्यवहारका सामान्य काम देखि टपरी गाँस्न पनि वहालाई आउदैनथ्यो । हाम्रो संयुक्त परिवार थियो, फुपुहरु, काका, काकी, काकाका छोराछोरी समेत गर्दा २०÷२२ जना हुन्थ्यौ । एकैचोटी यत्रो परिवारमा बस्नु पर्दा आमालाई निकै कठिन भएको थियो, घर व्यवहारका धेरै कुरा आमाले विहे पछि नै सिक्नु भयो । संयुक्त परिवार भएकोले खाने बेला, सुत्ने बेला सानु तिनु संघर्षै गर्नु पथ्र्यो । घरमा फरक फरक थालहरु थिए, कहिले कुन थाल, कहिले कुन थाल खाने बेला आफ्नो भागमा पथ्र्यो । आँफूलाई काँसको थाल पर्दा म गमक्क हुन्थे भने सिलावरको सेतो थाल पर्दा हेपिएको महशुष हुन्थ्यो, त्यति बेला सिलावरको थालमा हली लगायत अन्य कामदारलाइ दिइने चलन थियो ।
क्वाँटी पूर्णिमा लगायतका चाडपर्वहरुमा खाना खानकै लागी लाइनमा बस्नु पथ्र्यो । पछाडी पर्दा आफ्नो पालो आइञ्जेल मासु सकिन्छ कि भन्ने ध्यान हुन्थ्यो । मासुको झोल संगै एउटा चोक्टा पाइयो भने निकै खुसी लाग्थ्यो । नयाँ लुगा लगाउन दशैं नै कुर्न पथ्र्यो । स्वस्थानी पूर्णिमामा स्वस्थानी कथा खुव सुनिन्थ्यो, स्वस्थानीको कथाको चाखले भन्दा कथा सकिए पछि पाइने एक केस्रा सुन्तला वा एक टुक्रा उखुको लोभ हुन्थ्यो । तर मेरो बुवा सात वर्षे गोमाको सत्तरी वर्षे वृद्ध संग विवाह भएको स्वास्थानीको प्रसंगमा यो बालशोषणको पनि कथा हो भन्नु हुन्थ्यो । अनपढ मेरो बुवाको त्यति बेलाका त्यस्तो विश्लेषणले गर्ने शक्तिले म मा निकै प्रभाव पारेको छ । अहिलेका बालबालिका र हामीले भोगेका दुःख, सामना गरेका समस्या फरक छन् । द्वन्द्वको बेला बालबालिका अपहरणमा, एम्वुसमा परे कि भन्ने डर हमेशा रहन्थ्यो । अहिले छोरी ढिला घर फर्कदा बलात्कारमा परिन् कि ? सडक दुर्घटनामा पो परिन् कि भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छ ।
मैले कक्षा पाच सम्म लेवेरोटरी स्कुल र कक्षा दश सम्म शिक्षा सदन मावि धरानमा अध्ययन गरे । विद्यालयमा हुने नृत्य प्रतियोगितामा म नियमित भाग लिन्थे, हरेक पटक म पुरस्कार लिएर आउँथे, मेरो सफलतामा सबै खुसी हुनुहुन्थ्यो । स्कुलमा हुने नेतृत्वदायी कार्यक्रममा पनि म सधैं अग्रसरता देखाउँथे, मेरो फुपुहरु पनि मैले अध्ययन गरेको विद्यालयमा पढाउनु हुन्थ्यो । पढाईमा भने म सधै सामान्य विद्यार्थी थिए । बीए पढदा मेरी आमाले मेरो पढाईलाई व्यंग्य गर्दै भन्नु हुन्थ्यो ‘अरुले चन्द्रमामा गएर प्लानिगं गरिसके, तिमी अरुले लेखेको किताव पढ्न सक्तैनौ ?’
२०३५ सालमा मैले एसएलसी उत्तीर्ण गरे । धरानकै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक सम्मको अध्ययन पुरा गरे । ‘छोरीको विवाह छिटो गर्नु पर्छ’ भन्ने समाजमा मेरो आमाबुवा चाहि ‘एमए पास नगरी विहे गर्न हुदैन’ भन्नु हुन्थ्यो । आमाबुवाको यो स्पष्टता र सकारात्मक हौसलाले मैले छिटो विवाह गर्न परेन । हाम्रो घर नजिकै लक्ष्मी दिदीको एउटा मारवाडी परिवार थियो । एक दिन विवाहको लागि केटा हेर्न आए । केटा पक्षले लक्ष्मी दिदीको विभिन्न तरिकाले अन्तर्वार्ता लिए, उनको बोल्ने तरिका, हिंड्ने शैली र व्यवहारिक कुशलता विभिन्न तरिकाले जाँच गरियो । दुलहीलाइ कहिले कुर्ता सलवार, कअिले प्यान्ट, कहिले सारीमा क्याटवक जस्तै हीडन लगाइयो । तर दुल्हाको भने केहि पनि हेरिएन, अझ उनी उनका परीवारले ठीक छ भन्दै टीक लगाउदै गए । लक्ष्मी दीदीलाइ दुल्हा कस्तो लाग्यो भनेर सोध्दै सोधिएन । यी बीवाह बजारको प्रकृया नियाल्दा मलाई भने महिलाहरुलाई बस्तुको रुपमा हेरीने चलन रहेछ भन्ने त्यस्बेला थाहा भयो । पुरुष प्रधान समाजको यो व्यवहारले मलाई माभरि उकुसमुकुस बनाइ रहन्थ्यो, कस्लाइ कसरी सोध्ने मैले छीचोल्न सकेकि थिइन ।
स्नातकोत्तर तहको अध्ययनको लागी मेरो परीवारको पहिलो सदस्य म काठमाडौं आए । संयुक्त परिवारमा बसेकी मलाई सिमित खर्चमा र एक्सपोजर नभएकोले सुरुवाती दिनमा काठमाडौ गाहे भएको सम्झन्छु । अरुले पीजाको कुरा गर्दा मलाइ के होला भन्ने लाग्थ्यो । त्रिविको होस्टेलमा बस्दा ए ब्लक, वि ब्लक राजनैतिक तरिकाले संचालित हुदो रहेछ । होस्टेलमा बस्दा राजनैतिक अवधारणाको धारमा सामुहिक परिचय मेरो पनि बनेछ । युनिभरसीटीमा होस्टेल डे प्रतियोगिता हुन्थ्यो, मैले पनि भाग लिए । एउटा कार्यक्रममा मैले भुलिदिएछौ नि लै लै ढुग्रीं मुन्द«ी बुलाकि चादींचुरा नौगेडीलाइ, विर्सिदिएछौ नी लै लै दौरा सुरवाल खुकुरीलाइ भन्ने गीतमा नृत्य गरेकी थिए, जसमा मैरो परफमेन्स सबैलाइ मन परेछ, म धेरैको प्रीय बनेछ, त्यस्को खुवै चर्चा भएको थियो । पढाइमा म वर्ष भरि खास मेहनत नगर्ने, तर परीक्षा आउनु दुइ महिना अगाडी खुव पढ्थे । म एकदम घोक्न सक्थे, कीर्तिपुरबाट मैले राजनीति शास्त्रमा स्तातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरे र भोलि पल्टै समाज कल्याण परिषदमा अनुषन्धान अधिकृतको रुपमा कार्य शुरु गरे । मेरो पहिलो तलव रु. १४०० थियो । पहिलो तलब लिएर बिशाmल बजारमा गएर ७५० मा सारी किनेर आमालाइ पठाएकि थिए ।
मेरो विवाह ताप्लेजुङका प्रदिप श्रेष्ठ संग भयो । त्यति बेला वहा नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यति बेला दुईजनाको कमाई रु चार हजारले घर खर्च टार्न हम्मे हम्मे हुन्थ्यो । घर व्यवहार सबै हेर्नु पर्ने, चांडवाड पनि धान्नु पर्ने, घरमा नन्द, देवर, सासु अन्य सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो । सिमित खर्चमा धेरै आर्थिक जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अवस्थामा थियौं हामी । हामी दुबै आफ्नो खुटटामा उभिनु पर्छ भन्ने मान्यतामा अघि बढेका थियौं । २०४८ सालमा छोरा जन्मिदा टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएकी थिए म । अप्रेशन गर्नु पर्ने भयो, अप्रेशनको लागी चौध हजार लाग्ने भयो, त्यो खर्च धान्न संचय कोषबाट पैसा निकाल्नु पर्ने अवस्था थियो । आर्थिक अभावका ती दिनहरुले अरु संघर्ष गर्न प्रेरणा मिली रह्यो ।
अर्को मास्टर्स गर्न म महिला र विकास विषयमा गर्न नेदरल्याण्ड पुगे, तीन वर्ष को सानु छोरा छोडेर । त्यतिबेला मात्र मलाइ थाहा भयो हाम्रो पढाईको शैली ठीक रहेनछ भनेर । इतिहासका कुरा घोकेर पढेकी मलाई समस्याहरुको हल गर्नु गर्ने, क्रिटिल एनलाइसिस गर्न पर्ने, वैज्ञानिक, अन्वेषकहरुको अन्वेषणमा आफ्नो सन्दर्भमा बिबेचना गर्नु पर्ने, सबै काम कम्प्युटरमा गर्नु पर्ने, अंग्रेजी भाषामा अध्ययन, लेखन र प्रस्तुतिकरण दिनु पर्ने अवस्थाले निकै विचलित बनाएको थियो । तर मैले पढ्नै पर्छ भन्ने दरिलो आत्मविश्वास लिएर कोशिस गरि रहे । नेदरल्याण्डको पढाइले मेरो तेश्रो आँखा खुल्यो । हाम्रो अध्ययन शैलीले असल र खराबको मात्रै नीचोडमा पुग्ने, प्रश्न गर्ने प्रणालीलाइ दुरुत्साहित गर्ने अब्यवहारीक शीक्षा दिएको र आमुल सुधार गर्नुपर्ने मैले महशुष गरे ।
अध्ययन पुरा गरेर आए पछि त्यहि बेला बेइजिङको चौथो महिला सम्मेलन भयो, तत्पश्चात नेपालमा महिला मन्त्रालय गठन भएको थियो । मैले काजमा महिला मन्त्रालयमा काम गर्ने अवसर पाए । महिला मन्त्रालयमा मैले काम गर्दा निकै असहज परिस्थिति पनि भोग्नु पर्यो । समानताकालागि नीरन्तर वकालत गर्दा पुरुष सहसचिवज्यूहरुले अचम्म मान्नु हुन्थ्यो । ए शरु जी हामीले पनि महिलालाई नै प्राथमिकता दिएकै त छौ नि, राम भन्नु भन्दा पहिले सीताको नाम लिएकै छौ, कृष्ण भन्दा अगाडी राधालाई सम्झेकै छौ, आमालाइ विभेद गर्दैनौ, बुवालाई ढोग्दा आमालाई पनि ढोगेकै छौ, किन यस्तो उत्पात समानता÷समताको कुरा आएको ?’ आदि । त्यस्बेला ‘पोथी बासेको राम्रो हुन्न, पोथी कुरकुर गरेकै राम्रो’ भन्ने कुरा हाकहाक्की गनु हुन्थ्यो । महिला मन्त्रालय स्थापना भएपछि कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने करीब २०० वटा छलफलको समन्वयमा सहयोग गर्कि छु । हामी सबैको धारणा, मन्त्रालयले लैगिंक समानताको मूल प्रवाहिकरण, त्यस्को लागि क्षमता बिकास र अनुगमन गर्नु पर्छ भन्ने थियो, अहिले पनि त्यो तकै उत्तिकै भ्यालीड देख्छु । सहाना प्रधान महिला मन्त्री हुदा वाहासगं पनि काम गरे । वहाले धेरै दुखेसो र गुनासो म संग गर्नु हुन्थियो । घर, समाज, राजनैतिक दलको निर्दयीताको धेरै उदाहरण दिनु हुन्थ्यो ।
मैले बढुवाको परीक्षा दिएर उपसचिव पास गरेको १२ वर्ष पछि सरकारी जागिर छोडेर युएनडिपीमा ‘लैंगिक समतामा मूल प्रभाविकरण’ परियोजनामा तीन वर्ष काम गरे । त्यो बेला लोकसेवा र राजश्वमा महिला ११ बर्ष देखि उत्तीर्ण भएकै रहेनछन । मैले लोक सेवाको तयारीका लागि पहिलो विशेष कक्षा संचालन गर्दा १५ जना महिला मध्ये ४ जना पास भए । त्यस पछि युनिफेम हुदै युएन वुमनमा १७ वर्ष काम गरे । त्यति बेला महिला अधिकार, शसक्तिकरण, समता र समानताको सम्वन्धमा धेरै सरकारहरुसंग काम गर्ने अवसर जुर्यो । करिव चार पाँच वर्ष दक्षिण एसियाको बैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुको शसक्तिकरणको क्षेत्रको कामको सयाेंजक भए । समानता सम्बन्धि ऐन कानून नीति ल्याउन प्राविधिक सहयोग गर्ने काम गरे । केन्द्रिय तथ्याकं विभाग संग २ वटा जनगणनामा कसरी लैंगिक मूलप्रभाविकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सहकार्य भयो ।
मैले भोगेका, मैले देखेका र अनुभूति गरेका कमि, कमजोरी, विकृति, विसंगतिहरुमा कलम पनि चलाउदै आएकी छ । प्रकाशित, अप्रकाशित लेखहरुको संगालो ‘एउटा सिन्को भाँची हेर्दा’ शीर्षकको पुस्तक पनि प्रकाशित भएको छ । पुस्तक विक्री भएको पैसा वैदेशिक रोजगारमा जादा समस्यामा परेका महिलाहरुको लागी समर्पित गरेकी छु । मेरो पुस्तक इजीपटबाट फर्केकि कान्छिमाया तामाङले सगरमाथाको टाकुरा सम्म पनि पुर्याउनु भयो । युएनमा काम गर्दा लेख्न मिल्दैन, अनुमति लिनु पर्छ, तर मैले कुनै नीजि संस्था, राजनैतिक दलको लागी होइन, महिलाका समस्या र महिलाका विषयवस्तुहरुमा लेख्ने भएकी र युएनले म प्रति गरेको विश्वासले युएनमा रहदा नै मैले पुस्तक प्रकाशन गरे । लेखको माध्यमबाट एकैचोटी लाखौ सम्म पुग्न सकिने भएकोले जनचेतनाको लागी लेख प्रभावकारी माध्यम हो भन्ने म ठान्दछु । यहि सोचले म आगामी दिनहरुमा पनि मेरो लेखनलाई निरन्तरता दिनेछु । पहिले भन्दा सजिलो पनि छ, बन्धन छैन । मलाइ हामी महिला नैतिक, पारदर्शी र जीममेवार हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ । हामी अरुलाइ सीकाउने तर आफुले चै जे गरे नी हुने भनने अवस्थाबाट माथि उठनु पर्छ, यस किताब मेरो यहि सोचको परीणाम हो ।
म डायसपोराको नेपाल पोलिसी इन्टिच्युटसग. पनि आवद्ध छु, जस्ले विदेशका ज्ञान कसरी नेपालीहरुमाझ बाढ्न सकिन्छ भन्ने काममा कटिबद्ध छ । अन्तरपुस्ता महिलावादी समुह गठन गरेका छौं, जुन समुहबाट महिलाको क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरुमा आवाज उठाउदै छौ । देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा कृयाशील छ त्यस्को लागि ५१ प्रतिशत महिला समुद्ध हुनु पर्यो, आर्थिक हैसियत बढाउन परर्यो नि । २२ प्रतिशत मात्र महिला रोजगारमा आवद्ध छन नेपालमा । हाम्रो विकासको गतिलाई कुन गतिमा लैजाने भन्ने बिषयमा समस्या देख्छु । यो विषयमा सरकारलाई झक्झक्याउने काम पनि अन्तरपुस्ता महिला समुहबाट गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । यो पुस्ताले गरेको योगदान अर्को पुस्तालाई पनि थाहा होस् र सगैं सबै मिलेर काम नगरे परीवर्तन ल्याउन सकिनन भन्ने हामीलाइ लागेको छ । परीवर्तन त भएका छन नि २०० वटा छाउगोठ भत्काइयो तर दिमागको छाउगोठ भत्केका छैनन्, सामाजीक मुल्य मान्यताको छाउगोठ जताततै छ, कि हामी देख्दैनौ या नदेखेको झै गर्छौ ।
जीवन सोचे जस्तो कहिल्यै परफेक्ट हुदैन रहेछ यो निरन्तरको सिकाइ, भोगाइ र अवसर रहेछ भन्ने मलाइ लगेको छ । अहिले सम्म जति लड्दै, ठोक्किदै, हिँडदै उठदै गरियो, ठीकै रहेछ जस्तो लाग्छ मलाइ । म सामन्य परिवारमा जन्मेर, सरकारी स्कुल पढेकी मान्छे युएन सम्म पुग्न सके र स्वेच्छाले युन छोड्न पनि सके, मेरो यो यात्रामा चादनी जोशी, लगायत धेरैको साथ र सहयोग पाएकी छु, चरिमाया तामाङ, कान्छिमाया तामाङलाई सम्झदा कस्तो लाग्छ भने हामीले अलिकति बाटो देखाउन सके धेरैले खुरुखुरु अघि बढ्न सक्छन् । नेपाल सम्भवाना नै सम्भावना भएको देश हो, यो देशमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ , कुनै पनि महिला बोलिरहेको, केहि सामान बेचिरहेको, कुनै व्यवसायमा संलग्न भएको देख्दा मलाई खुसी लाग्छ । देश अहिले सक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको छ, यो बेला सरकारलाई सहयोग पनि चाहिएको छ, हामीले खबरदारी गरी रहनु पर्छ । म माटो र मुलुककालागि निरन्तर र निशर्त सिन्को भाची रहने छु ।